- Page 77 of 86 - News and Entertainment
ဝူဟန်ထူးဆန်းတုတ်ကွေး သတင်းများ 1-2-2020
ဝူဟန်ထူးဆန်းတုတ်ကွေး သတင်းများ 1. ဝူဟန်ထူးဆန်းတုတ်ကွေး သတင်းတွေထဲက စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေထဲမှာ ရင့်နင့်စရာတွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ ရောဂါရှိတယ်လို့ သံသယ ဖြစ်သူတွေကို သီးခြားခွဲထားတဲ့အခါ ညီအကို မောင်နှမ သားသမီး မိဘတွေကို မျက်စိရှေ့က မှန်လုံခန်းထဲ မှာထားတော့ မြင်ရသူတွေမှာ ကြေကွဲရပါတယ်။ ရောဂါသံသယနဲ့ ကလေးငယ်တွေဆိုရင် မိဘတွေကို မှန်လုံခန်းထဲကနေ ငိုယိုပြီး ချီခိုင်းတာကို မြင်ရသူတိုင်း ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ ကလေးလေးက မှန်လုံခန်းထဲကနေ သူ့အဖေကို ချီခိုင်းတော့ ငိုယိုရတဲ့ အဖေ့ ဓာတ်ပုံ လိုင်းပေါ်တက်လာတော့ အားလုံးက စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ photo ; twitter 2. နောက် သတင်းတစ်ပုဒ်ကလည်း အိမ်မွေးကြောင်တွေ ခွေးတွေကို ကော်ရိုနာ ဗိုင်ရက် သယ်ဆောင်သူတွေ …
Previous 1 … 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Next